ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပညာသွားရောက်သင်ကြားဖို့ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးများ နဲ့ မိဘများ အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံပညာရေးစနစ် အကြောင်းကို crown education မှရှင်းလင်းချက်အား မျှဝေဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အစားအသောက်၊ ယဉ်ကျေးမှုများစွာတူညီပြီး လေယဉ်ဖြင့် (၁)နာရီခန့်သာသွားလာရသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက် အဆင့်မြင့်ပညာကိုသင်ယူဖို့ရွေးချယ် သင့်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ခရီးသွားရန် အချိန်အားဖြင့် များစွာမကွာဝေးသည် သာမက၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ယူ ရာတွင် ပညာရေးတွင် အဆင့်မြင့်မားသည့်အလျောက် ကုန်ကျစရိတ် မှာလည်းအံ့သြဘွယ်ကောင်း လောက်အောင် သက်သာသည်။ ၂+၂ ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံတွင် (၂)နှစ် သြစတြေလျနိုင်ငံတွင် (၂) နှစ်ဖြင့် သင်ယူနိင်သည့် အစီအစဉ်များလည်းရှိသည်။
Recommended for you - သင်ဘယ်နှစ်ကြိမ် ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရဘူးပါသလဲ?
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားရာတွင် တစ်နှစ်လျင် စာသင်စရိတ် အနည်းဆုံး US$ 4000 ခန့်မှ စ၍ ပညာသင်ကြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်မှ တိုက်ရိုက် ချီးမြင့်ပေးအပ်သည့်ဘွဲ့ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သင်ယူနိုင် သကဲ့သို့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် (၂)နှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၂) နှစ်ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်သည့် တက္ကသိုလ်များလည်းရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သင်ကြားသည့် ကုန်ကျစရိတ်ခန့်ဖြင့်ပင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်ပညာရေးကို လေ့လာသင်ကြား နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကျောင်းများကို City Campus နှင့် Main Campus ဟုတွေ့ရှိနိုင်ပြီး၊ City Campus ကို သွားရေးလာရေးလွယ်ကူသည့် ဘန်ကောက်မြို့ပေါ်တွင် ဖွင့်လှစ် ထားရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် အများစု၏ Main Campus များသည် အလွန် ကျယ်ဝန်းပြီး၊ တက္ကသိုလ်အင်္ဂါရပ်နှင့် လျော်ညီစွာ ပစ္စည်း ကရိယာများ၊ တက္ကသိုလ် ပရဝုဏ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆေက်ထားသည်။ အချို့ တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းဝန်းအတွင်း ကျောင်းသူကျောင်းများလုံခြုံစိတ်ချစွာ နေထိုင်စားသောက်နိုင်ရန်အဆောင် များပါ စီစဉ်ထားပေးသည်။
လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့် ပညာရပ်များမှာလည်း Business, IT, Engineering, Aeronautic Engineering, Civil, Archi, Interior Design, Fashion Design စသည့်ဘာသာရပ်များမှသည် ဆရာဝန်များအတွက် Health Care Management ဘာသာရပ်များ၊ Teaching နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်ဘာသာရပ်များ၊ MBA, MSc စသည့်ဖြင့် အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် လော့လာသင်ကြားနိုင်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဟော်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်များကိုလည်း အလုပ် အတွေ့အကြုံဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လေ့လာ သင်ကြားနိုင်သည်။
ရွေးချယ်နိုင်သည့် ဘာသာရပ်လည်း များသည့်အပြင် အစားအသောက်နေထိုင်မှုပုံစံ ယဉ်ကျေးမှုကလည်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သိပ်ပြီးမကွာခြားသည့်အချက် နိုင်ငံတကာကျောင်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသည့် အချက် မိဘများ သွားရောက်လျှင်လည်း နာရီပိုင်းသာ ကြာမြင့်သည့် အချက်တွေက ကျောင်းသားတွေ အတွက်ရော မိဘများအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စား သည့် ကျောင်းသားများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံက ပညာသွားရောက်သင်ယူဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးထဲက တစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းချင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပညာသွားရောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားပြီး ထိုင်းဘာသာစကားကိုပါ သင်ယူထားချင်သူများ sayar.com.mm တွင် ရှိသော ထိုင်းဘာသာသင်ကြားပေးသော ဆရာ ဆရာမများနှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
သင်က ဆရာတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လက်တွဲလိုက်ပါ။ အခုပဲ အခမဲ့ register လုပ်လိုက်ပါ။
ထိုငျးနိုငျငံတှငျ ပညာသှားရောကျသငျကွားဖို့ စိတျပါဝငျစားတဲ့ ကြောငျးသား ကြောငျးသူလေးမြား နဲ့ မိဘမြား အတှကျ ထိုငျးနိုငျငံပညာရေးစနဈ အကွောငျးကို crown education မှရှငျးလငျးခကျြအား မြှဝဖေျောပွ ပေးလိုကျပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ အစားအသောကျ၊ ယဉျကြေးမှုမြားစှာတူညီပွီး လယေဉျဖွငျ့ (၁)နာရီခနျ့သာသှားလာရသညျ့ ထိုငျးနိုငျငံသညျ မွနျမာနိုငျငံမှကြောငျးသူကြောငျးသားမြား အတှကျ အဆငျ့မွငျ့ပညာကိုသငျယူဖို့ရှေးခယျြ သငျ့သညျ့ နိုငျငံတဈနိုငျငံဖွဈပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ခရီးသှားရနျ အခြိနျအားဖွငျ့ မြားစှာမကှာဝေးသညျ သာမက၊ ထိုငျးနိုငျငံတှငျပညာသငျယူ ရာတှငျ ပညာရေးတှငျ အဆငျ့မွငျ့မားသညျ့အလြောကျ ကုနျကစြရိတျ မှာလညျးအံ့သွဘှယျကောငျး လောကျအောငျ သကျသာသညျ။ ၂+၂ ပရိုဂရမျဖွဈသော ထိုငျးနိုငျငံတှငျ (၂)နှဈ သွစတွလေနြိုငျငံတှငျ (၂) နှဈဖွငျ့ သငျယူနိငျသညျ့ အစီအစဉျမြားလညျးရှိသညျ။
Recommended for you - သငျဘယျနှဈကွိမျ ငွငျးပယျခံခဲ့ရဘူးပါသလဲ?
ထိုငျးနိုငျငံတှငျပညာသငျကွားရာတှငျ တဈနှဈလငျြ စာသငျစရိတျ အနညျးဆုံး US$ 4000 ခနျ့မှ စ၍ ပညာသငျကွားနိုငျသညျ။ ထို့အပွငျ အမရေိကနျမှ တိုကျရိုကျ ခြီးမွငျ့ပေးအပျသညျ့ဘှဲ့ကို ထိုငျးနိုငျငံတှငျ သငျယူနိုငျ သကဲ့သို့ ထိုငျးနိုငျငံတှငျ (၂)နှဈ အမရေိကနျနိုငျငံတှငျ (၂) နှဈဆကျလကျပညာသငျယူနိုငျသညျ့ တက်ကသိုလျမြားလညျးရှိသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျသငျကွားသညျ့ ကုနျကစြရိတျခနျ့ဖွငျ့ပငျ ထိုငျးနိုငျငံရှိ နိုငျငံတကာအဆငျ့ တက်ကသိုလျကွီးမြားတှငျ နိုငျငံတကာအဆငျ့ပညာရေးကို လလေ့ာသငျကွား နိုငျသညျ။
ထိုငျးနိုငျငံတှငျကြောငျးမြားကို City Campus နှငျ့ Main Campus ဟုတှရှေိ့နိုငျပွီး၊ City Campus ကို သှားရေးလာရေးလှယျကူသညျ့ ဘနျကောကျမွို့ပျေါတှငျ ဖှငျ့လှဈ ထားရှိသညျ။ ထိုငျးနိုငျငံရှိ တက်ကသိုလျ အမြားစု၏ Main Campus မြားသညျ အလှနျ ကယျြဝနျးပွီး၊ တက်ကသိုလျအင်ျဂါရပျနှငျ့ လြျောညီစှာ ပစ်စညျး ကရိယာမြား၊ တက်ကသိုလျ ပရဝုဏျမြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးတညျဆကျေထားသညျ။ အခြို့ တက်ကသိုလျမြားတှငျ ကြောငျးဝနျးအတှငျး ကြောငျးသူကြောငျးမြားလုံခွုံစိတျခစြှာ နထေိုငျစားသောကျနိုငျရနျအဆောငျ မြားပါ စီစဉျထားပေးသညျ။
လလေ့ာသငျယူနိုငျသညျ့ ပညာရပျမြားမှာလညျး Business, IT, Engineering, Aeronautic Engineering, Civil, Archi, Interior Design, Fashion Design စသညျ့ဘာသာရပျမြားမှသညျ ဆရာဝနျမြားအတှကျ Health Care Management ဘာသာရပျမြား၊ Teaching နှငျ့ ဆကျစပျပတျသကျသညျ့ဘာသာရပျမြား၊ MBA, MSc စသညျ့ဖွငျ့ အမြိုးအစားစုံလငျစှာဖွငျ့ လော့လာသငျကွားနိုငျသညျ။ ခရီးသှားလုပျငနျးနှငျ့ ဟျောတယျစီမံခနျ့ခှဲမှု ဘာသာရပျမြားကိုလညျး အလုပျ အတှအေ့ကွုံဖွငျ့ ထိုငျးနိုငျငံတှငျ လလေ့ာ သငျကွားနိုငျသညျ။
ရှေးခယျြနိုငျသညျ့ ဘာသာရပျလညျး မြားသညျ့အပွငျ အစားအသောကျနထေိုငျမှုပုံစံ ယဉျကြေးမှုကလညျး မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ သိပျပွီးမကှာခွားသညျ့အခကျြ နိုငျငံတကာကြောငျးမြားနှငျ့လညျး ခြိတျဆကျထားသညျ့ အခကျြ မိဘမြား သှားရောကျလြှငျလညျး နာရီပိုငျးသာ ကွာမွငျ့သညျ့ အခကျြတှကေ ကြောငျးသားတှေ အတှကျရော မိဘမြားအတှကျပါ အဆငျပွစေနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နိုငျငံတကာ ပညာရေးကို စိတျဝငျစား သညျ့ ကြောငျးသားမြားအတှကျ ထိုငျးနိုငျငံက ပညာသှားရောကျသငျယူဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးထဲက တဈနိုငျငံဖွဈကွောငျး ညှနျးခငျြပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ပညာသှားရောကျဖို့စိတျဝငျစားပွီး ထိုငျးဘာသာစကားကိုပါ သငျယူထားခငျြသူမြား sayar.com.mm တှငျ ရှိသော ထိုငျးဘာသာသငျကွားပေးသော ဆရာ ဆရာမမြားနှငျ့ ဆကျသှယျလိုကျပါ။
သငျက ဆရာတဈယောကျဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့နဲ့ လကျတှဲလိုကျပါ။ အခုပဲ အခမဲ့ register လုပျလိုကျပါ။
Read 550 times Last modified on Thursday, 11 January 2018 16:21
လူတွေရဲ့ ဘ၀ကိုကူညီရင်း လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကို တည်ထောင်ခဲ့သူ
ဖတ်နေတာက စာ ခေါင်းထဲရောက်သွား တာကအမှိုက်